Abalandeli nomkhankaso wokweseka uKatlego - Ilanga News
Home Izindaba Abalandeli nomkhankaso wokweseka uKatlego
Abalandeli nomkhankaso wokweseka uKatlego
UKATLEGO Maboe nenkosikazi yakhe uMonique Muller, ngezikhathi zentokozo.
ABAZWELANA nosaziwayo uKatlego Maboe baqale umkhankaso wokumeseka, bafuna inkampani yomshwalense i-OUTsurance, ihoxise isinqumo sayo sokuthi ihlela ukumkhipha kuzona zonke izikhangiso ezinaye njengoba ubeyinxusa layo.
Izolo ntambama, incwadi yesikhalo (petition) eshicilelwe kwi-change.org, ibisisayinwe ngabantu abangaphezu kuka-10 400, abafuna le nkampani ihoxise lesi sinqumo.
Lesi sikhalo bekulindeleke ukuba sisayinwe ngabantu abangu 15 000. Obhale incwadi yesikhalazo, wayishicilela kwi-change.org, ozibiza ngoLindy kaMahlobo, uthe indaba kaKatlego yokuphinga bekungeyona eyokuthi ize iphumele emphakathini yindaba yababili yasekamelweni.
Abasayine lesi sikhalo bavumelana ngokuthi uma i-OUTsurance ingasiguquli isinqumo sayo, bazoyiduba le nkampani.
UKatlego ubesematheni kusukela kusabalale i-video yakhe ezinkundleni zokuxhumana, lapho evuma khona kwinkosikazi yakhe uMonique Muller, ukuthi uphingile.
Kule video inkosikazi izwakala imnqumela ugwayi katiki, ngokuthi akhethe ukuphumela obala ngomuntu abejola naye noma ibophe imithwalo yayo ihambe. UKatlego ube esesho ukuthi ubephinga noNikita Murray, wathi balala kanye. Yona inkosikazi yakhe izwakala imsola nangokuthi uyithelele ngesifo socansi esingagcina senze ukuthi ingaphinde ikwazi ukuthola abantwana.
Kuthe lungakapheli usuku lwangoLwesihlanu waqonga umthwalo kuKatlego. Inkampani ekhiqiza uhlelo lukamabonakude, i-Expresso Morning Show, abelwethula uKatlego, ikhiphe isitatimende isho ukuthi kayihambisani nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Ithe izinsolo esezisabalale ezinkundleni zokuxhumana kayizithathi kancane ngakho ithathe isinqumo sokumhoxisa ohlelweni uKatlego kuze kube kuphothulwa uphenyo.
Nabakwa-OUTsurance, nabo bakhiphe isitatimende bathi lo saziwayo uzosuswa kuzona zonke izikhangiso zabo ngenxa yokuthi kabahambisani nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane.
Esitatimendeni asikhiphile lo saziwayo eziphendulela, uvumile ukuthi akathembekanga kowakwakhe, nokuthi yena noMonique bayehlukanisa.
“Angizange ngithembeke enkosikazini yami ngesikhathi esibaluleke kakhulu empilweni yethu, nokuyisenzo engizisolayo ngaso,” kusho yena.
Uwaphikile amahlebezi okuthi uke wayihlukumeza inkosikazi yakhe njengoba kushiwo ezinkundleni zokuxhumana.
“Emibikweni eshiwo ngami, ngifisa ukusho ukuthi angikaze ngihlukumeze inkosikazi yami selokhu kwathi nhlo futhi ngisazoqhubeka nokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane, empeleni ngisho kungabe kuhlukunyezwa bani. Ngikhethe ukubhekana nalolu daba ngasese ukuvikela umntwana wethu. Ngizoshiyela konke kwabomthetho ukuze iqiniso liphumele obala,” esho esitatimendeni.
Previous articleUHunt nobunzima kwiChiefs
Next articleUzakhele Fugazi ngokufuna kusizwe abasemakhaya